Tsaroan’ireo Tanzaniana Miaraka Amin’ny #DearNyerere ilay Ray Nanorina Ny Fireneny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2015 3:00 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Français, Español, Esperanto , English
Mwalimu Nyerere miaraka amin'ny Filoha Alemana Tandrefana taloha, Richard von Weizsäcker , tamin'ny 1985. Sary navoakan'ny arsiva Federaly Alemàna teo ambany Creative Commons
Hatramin'ny nahazoany fahaleovantena avy amin'ny Britanika tamin'ny 1961, efa nanana filoham-pirenena efatra i Tanzania. Ny voalohany, Julius Kambarage Nyerere, antsoin'ny maro amin'ny anaram-boninahitra nomena azy hoe Mwalimu Nyerere, no tena hajaina sy tiana indrindra amin'ireo filoham-panjakana teo amin'ny tantaran'i Tanzania.
Nyerere, tsaroana am-pitiavana ihany koa amin'ny hoe Baba wa Taifa (Rain'ny Firenena amin'ny fiteny Swahili), ankoatry ny zavatra hafa, no lazaina fa nametraka fototra mafy ho an'ny firaisam-pirenena sy ny maha-izy azy ilay firenena iray izay ahitàna foko efa maherin'ny 120 — zavabita tsy fahita firy amin'ny tontolo politika Afrikana — sady nanandratra ny Swahili, ilay teny tsy anà foko nefa ampiasaina betsaka ao Afrika.
Mpanohana matanjaka ny hetsika ho fanafahana ny tanibe sy ireo hetsika fanoherana ny mpanjakazaka manerana izao tontolo izao izy. Tsy atao mahagaga intsony raha fikambanana politika toy ny FRELIMO tao Mozambika, ny ANC sy PAC tao Afrika Atsimo, ZANU sy ZAPU tao Zimbabwe, ny MPLA tao Angola ary SWAPO tao Namibia no samy nànana toby fanazarantena sy birao tany Tanzania. Fanampin'izay, nanome fialofana azo antoka ho an'ireo Amerikana mpikatroka mafàna fo amin'ny fiarovana ny zon'ny olontsotra ihany koa ny fireneny, dia ireo mpikambana tao amin'ny antoko Black Panther toa an-dry Pete O'Neal sy Geronimo, ary ireo mpanohitra ny ady tao Vietnam.
Enina ambinifolo taona taorian'ny nahafatesany ny 14 Oktobra 1999, mampiasa ny tenifototra #DearNyerere ry zareo Tanzaniana mba hahatsiarovana azy, indrindra fa tao anatin'ny vanim-potoanan'ny fifidianana izay ho solombavambahoaka Tanzaniana natao ny 25 Oktobra 2015.
‘Tsy hino mihitsy ianao hoe mpangataka ny firenenao’
Mahatsiahy ny lasa, hadisoam-panantenana ary tsy fahafahampo tanteraka amin'ny fomba itantanana ny firenena hatramin'ny nahafatesany ny ankamaroan'ireo bitsika.
Namintina ny tsy fahafahampony amin'ny fitantanana politika misy ankehitriny ao amin'ny fireneny i Glady Shao :
#DearNyerere raha afaka niverina ianao androany, dia angamba ho vaky fo sy ho faty fanindroany indray raha mahita ny zavatra nataon'ny sasantsasany amin'ireo mpitarika
Nitarainan'i Nabil Omar ny tsy fahaizana mitantana ireo otrikarena voajanahary toy ny Tanzanite:
#DearNyerere tsy an'ny Tanzaniana intsony ny Tanzanite, notehirizinao ho anay izy io saingy zara raha mahazo tombony aminy ny vahoaka. Halatra no mameno tanàna
Mineraly tsy fahita firy raha tsy ao Tanzania irery ihany ny Tanzanite. Kanefa, India no voalaza ho mpanondrana betsaka indrindra an'io mineraly io na eo aza ny fandraràna amin'ny ampahany ataon'ny governemanta Tanzaniana tsy hanondranana azy.
James Ngonyani nibitsika tamin'ny teny Swahili:
#DearNyerere, tsy hino ianao hoe mpangataka ny firenenao na dia fahatelo lehibe indrindra amin'ireo mpanondrana volamena eto ambonin'ny tany aza.
Nanoratra momba ny fomba fijery malaza be ijerena ny antoko eo amin'ny fitondrana, Chama Cha Mapinduzi (CCM), i W. Quiyenga, antoko izay nampian'i Nyerere ny fananganana azy:
#DearNyerere, miteny ny Tanzaniana fa aleon-dry zareo mifidy vato kilonjy toy izay ny CCM
‘Tamin'ny andronao, ny asa tsara no fototry ny laza’
Nitaraina i Steve Ole Moruo :
Nanamarika i David Nguma :
#DearNyerere, mitanisa teny nolazainao ireo antoko mpanohitra [any anaty fampielezankevitra ho amin'ny fifidianana]. Menatra hitanisa anao kosa ny CCM any anatin'ireo fampielezany hevitra satria namadika anao izy ireo.
Naniry i Albert Secha hoe :
#DearNyerere, tokony hiverina hitantana an'i Tanzania ianao na dia ho herintaona monja aza! Herintaona monja! …Malahelo ny fahitsianao/fahamendrehanao izahay!
Nibitsika momba ny fandrobàna miharo habibiana atao ao amin'ny firenena i Van Official :
#DearNyerere, navelanao niaraka taminà elefanta izahay izay tsy misy intsony ankehitriny, efa “mitaingina fiaramanidina” izao ny zirafy (girafe) [sarinteny ivazivaziana momba ny halatra zirafy mankany ivelan'ny firenena].
Manana harena anaty ala voarara tsy haondrana i Tanzania taorian'ny nangalarana sy nandefasana ho any ivelan'ny firenena ireo biby sy vorona efa ho 130, isan'izany ny zirafy. Lasa misidina anatinà fiaramanidina cargo iray ny vokatry ny ala avy ao Tanzania ho any Qatar.
Raha ny fifidianana izay ho solombavambahoaka no jerena, tsipalotr'i Othman fa :
#DearNyerere, na mbola teo aza ianao, tsy ho ianao no ho antony hahatonga ny Tanzaniana hitia ny CCM
‘Ho mendrika fotsiny izao i Tanzania’
Tsy ny rehetra mampiasa Twitter no nampiasa ilay tenifototra mba hitarainana momba ny toedraharaha misy ao amin'ny firenena. Michael Paul Baruti, ohatra, nibitsika hoe :
Mbola eto isika izao, matanjaka hatrany hatrany…Manomboka mahazo toerana ny fangaraharàna sy ny tamberin'andraikitra….Ho mendrika fotsiny izao i Tanzania
Nanoratra i While Kibibi hoe :
#DearNyerere, mitohy mivoatra ny firenentsika
Vakio ity tafatafa tamin'i Nyerere ity, nataon'i Ikaweba Bunting fony izy mbola velona, mba hamantaranao bebe kokoa momba ny vina nanànan'i Nyerere ho an'i Tanzania.